Mpanan-karena mahantra! | NewsMada
Fomba fiteny toa efa mahazatra ny Malagasy, saingy mifono zava-dalina rehefa dinihina akaiky satria ny andavanandrom-piainana mihitsy no voalaza ao anatin’izany. Harena goavana be ny velaran’i Madagasikara raha oharina amin’ny mponina ao aminy. Firy amin’ny Malagasy anefa ny manan-tany? Sarotra, faran’izay sarotra ny mangataka tanim-panjakana. Vola sy fotoana lany, manginy fotsiny. Fambolena sy fiompiana, ireo ny harena eo amin’ny Malagasy.
Tsy nisaraka tamin’ny tany izy fa nosarahina tamin’ny tany… Nidiran’ny mpanjakazaka an-tanin’olona ny taniny. Aty aoriana, nanjakan’ny dahalo ny fananany. Niala tsy fidiny teo amin’ny tany nohajariny izy. Hatreto anefa, ampahany kely dia kely amin’izany tany izany ihany no voaverina eo aminy.
Raha tena tiana marina ny hampandroso an’i Madagasikara sy ny Malagasy, mila jerena manokana ny momba io tranga io. Maninona ny Malagasy no mifanaritaka sy miady mifamono noho ny raharahan-tany? Misy antony ao! Fa maninona ny Malagasy tsirairay no tsy manana tany kanefa i Madagasikara, malalaka be? Misy antony ao!
… Mila hanaovana ezaka manokana ny hananan’ny Malagasy tany. Mitaky fanamorana izany. Fikarakarana ny taratasy, ny sarany aloa, ny fepetra arahina, sns, hamboarina avokoa ny lalàna mifandraika amin’ireo. Tsy zava-baovao ny fanomezana tany ho an’ny olona tsirairay fa efa nisy fony fahampanjaka satria « tsy manam-pahavalo afa-tsy ny mosary aho », hoy Andrianampoinimerina.
Raha omena ny Malagasy ny tany. Omena azy ny fitaovana hoenti-mamboly. Omena azy ny masomboly. Omena azy ny tsena hivarotana ny vokatra, sns. Anjaran’ny fanjakana ny mandrindra ny fanatanterahana ireo amin’ny ankapobeny. Ho Nosy sambatra tokoa i Madagasikara atsy ho atsy!